Adoxy Healthy Cell Food | Health and Beauty Myanmar
Home » Fashion and Lifestyle » Beauty & Spa » Adoxy Healthy Cell Food ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု သဘာဝ ဆဲလ်အာဟာရအရည်
Contact Number: 09-73017935
Email Address: adoxyforall@gmail.com
Listed: January 28, 2014 7:34 pm
မြန်မာနိူင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဌာန ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန မှ ထောက်ခံချက်အမှတ် IR-R/2013-B1/729 ရရှိထားပြီးဖြစ်သော ADOXY. Adoxy Healthy Cell Food
ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု သဘာဝ ဆဲလ်အာဟာရအရည်
လူ့ဘ၀အတွက် အရေးကြီးသောအရာ (၃)ခု မှာ ၁။ အာဟာရဓါတ်(၅)မျိုး ပါဝင်သော အစားအစာ ၂။ ရေကောင်းရေသန့် ၃။ လေကောင်းလေသန့် (အောက်ဆီဂျင်)
လူ့ဘ၀တွင် ထိုအရာတစ်ခုခုပြတ်လပ်ရန် မဖြစ်နိုင်သည်မှာ သေချာပါ သည်။ လူသားများအနေဖြင့် ထိုအရာတစ်ခုခုပြတ်လပ်မှု (သို့) ခန္ဓာကိုယ်၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ထိုအရာတစ်ခုခုအား လုံလောက်စွာ မရရှိပါက ရောဂါ ဖြစ်ရန် အရင်းအမြစ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်တွင် ရောဂါ အမျိုးမျိုး ရှိသောခေတ်ဟု ဆိုရပေမည်။ ဥပမာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ရောဂါ အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသော အောက်ဆီဂျင်နှင့် အစာအာဟာရတို့ကို ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်များမှ စုပ်ယူပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းရန် စွမ်းအင်အဖြစ် ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထို့အတူ အဆိပ်အတောက် (Detox) များကို ဖယ်ရှား ပေးပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပေးခြင်းဖြင့် အညစ်အကြေးနှင့်မလိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားထုတ်ပစ်ခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်ခါ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများ အားလုံးသည် တူညီသည့်အခက်အခဲ ကံကြမ္မာတစ်ခုဖြစ်သော လေကောင်း လေသန့်ပြတ်လပ်မှုကို ခံစားနေရသည်မှာ ငြင်းဆိုနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ တစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာခြင်း၊ ကား များလည်း နေ့စဉ်များပြားလာခြင်းနှင့် လူဦးရေမှာလည်း ဆထက်တပိုး တိုးလာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆန့်ကျင်ဘက် အနေဖြင့် ထူထပ်သော သစ်တောများလည်း တဖြည်းဖြည်းပြုန်းတီးလာသည် ကို ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ မြင်တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဆဲလ်များ သည် မိမိတို့၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လေကောင်းလေသန့်ကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာ လိုအပ်နေပါသည်။ လေကောင်းလေသန့် (အောက်ဆီဂျင်)သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်သောအရာ တစ်ခုဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှငြင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရေပြတ်လပ်ပါက (၁၅) ရက်ခန့် အသက်ရ
Ad Reference ID: 36852e73742e462f
Listed by: May Myat Mon
Other items listed by May Myat Mon
Latest items listed by May Myat Mon »
All times are GMT 6.5. The time now is 4:36 am.